पर्वतका छात्रालाई छैन सेनेटरी प्याड ! - स्वास्थ्य | Kantipur TV HD
पर्वतका छात्रालाई छैन सेनेटरी प्याड !
पर्वतको मौदी गाउँपालिका ५ बाजुङको महेन्द्र शिखर माध्यमिक विद्ययालयमा २ सय १७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरु मध्ये १ सय २४ जना छात्रा छन् । सरकारको निती अनुसार विद्यायलयले सुरुमा छात्राका लागि सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले महेन्द्र शिखर माध्यामिक विद्यायालयमा सेनेटरी प्याड र पेटको दुःखाई कम गर्ने औषधि छैन ।
किशोरीहरूलाई रजस्वला हुादा समेत नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सेनेटरी प्याडको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थियो । सम्वन्धित शिक्षिका सरुवा भएका कारण प्याडलाई निरन्तरता दिन नसकिएको विद्यालयको भनाई छ ।
विद्यालयले सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरे नगरेको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।
महिनावारीका बेला प्याड नभएकै कारण धेरै छात्रा विद्यालय आउन सक्दैनन् । प्याड किन्ने पैसा पनि नहुने र विद्यालयमा पनि उपलब्ध नभएका कारण घरमै बस्न वाध्य भएको विद्यार्थीको भनाई छ । सरकारी निती तत्काल कार्यान्वयनमा आएपनि त्यसले निरन्तरता नपाउादा यस किसिमका समस्या हरेक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।
भारतबाट स्वदेश फर्किनेको चाप बढेसँगै दुई सातामै संक्रमण तेब्बर वृद्धि
स्वास्थ्यकर्मी : फ्रन्टलाइनमा पनि, जोखिममा पनि
मृगौलाको डाइलासिस सेवा नपाउँदा वीरगञ्जमा एक महिनामा सात जनाको ज्यान गयो
निजी तवरमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने निर्णय पछी लाग्ने शुल्कबारे चासो